विहेको हप्ता दिन नहुँदै विदेशले तान्यो श्रीमान् |
विहेको हप्ता दिन नहुँदै विदेशले तान्यो श्रीमान्
प्रकाशित मिति :2019-05-09 12:49:48
सिन्धुली । ज्यान फतक्क गलेको छ । निन्द्रा लागेकै छैन । थकाइले लखतरान छु । आँखा लोलाउन खोज्छ तर, लोलाएका आँखालाई उथुलपुथुल भएको मनले जितेको छ । अल्छिलाई जित्दै जुरुक्क उठ्यो जुर्मुराएको मन । मनले जितेपछि त्यही अनुसार मष्तिस्क पनि तयार भए । अनि कोरियो यी मनैले कोरे यी अक्षरहरु ।
यी अक्षरहरु तीनका भोगाइ हुन्, जसले श्रीमानसँग विवाहको उमंग पाँच दिनपनि बाँड्न पाएनन् । जीवनसाथीलाई नजिकबाट बुझ्नै भ्याएनन् । कसैको त विवाहको रीत मानिने ‘दुलन’ समेत फर्काउन पाएका छैनन् । श्रीमानलाई वैदेशिक रोजगारीले तान्यो । उनीहरु बेतलबी कामदार झैं श्रीमानको घर धानिदिएर गनिरहेका छन् श्रीमान घर फर्किने दिन ।
विहेको डेढ वर्षमा पनि दुलन फर्काउन पाएको छैन
१९ वर्षको भएँ । विवाह भएको डेढ वर्ष भयो । परिवारमा सासू ससुरा सहित ६ जना छन् । माईती काभ्रे, घर मरिण, सिन्धुली । विवाहको पर्सिपल्ट श्रीमान साउदी जाउनुभयो । विवाहको २ दिनमात्रै सँगै बस्यौं । श्रीमान् साउदीमा स्काफफोल्डिङ्ग कामका गर्नुहुन्छ । उहाँको श्रम अवधी ३ वर्षको छ । अब डेढ वर्षपछि मात्रै ३ वर्ष पुग्छ । श्रीमानसँग बिताएको विवाहपछिको २ दिन सम्झिएर दिन बिताउँदैछु ।
विवाहअघि विदेश जाने कुरा मलाई थाहै थिएन । विवाहको पहिलो रातमै श्रीमानले पर्सिपल्ट विदेश जाने सुनाउँदा अत्यास मात्रै लागेन । राती नै भागेर माइती जाउँ जस्तो लागेको थियो । विवाहको बेला कक्षा १० पढ्दै थिएँ । विवाहपछि पढाइको लागि माइतीमै बस्ने कुरा थियो । तर, त्यस्तो भएन ।
म विहे भएदेखि श्रीमान्कै घरमा छु । हाम्रोतिर विहेपछि श्रीमान्सँग दुलन फर्काउन जाने चलन छ । मेरो त श्रीमान घर हुनुहुन्न । एक्लै माइती जाँदा गाउँलेले के भन्लान् भनेर माइती जानपनि सकेको छैन ।
जो भनेर विवाह गरेर आएँ, उही विदेश गयो । सासू,ससुरा, नन्द देवरहरुसँग बोल्नै डर लाग्छ । कसरी हाँसीखुसी बस्नु ! कहिलेकाहीँ श्रीमान्सँगै साउदी जानपाए हुने जस्तो लाग्छ ।
तर, साउदीमा त्यस्तो हुँदैन रे । श्रीमानले कमाएको पैसा सबै सासूको नाममा पठाउनुहुन्छ । श्रीमानले महिनामा ५ हजार दिनु भन्नुभएको छ, त्यही अनुसार सासूआमाले खर्च दिनुहुन्छ ।
श्रीमानले आम्दानी परिवारमा पठाएकोमा मलाई गुनासो छैन । तर, एक्लै बिताउनु परेको जिन्दगीप्रति भने गुनासो छ । मलाई चित्त नबुझेका अरु कुरा पनि छन्, ‘श्रीमान्का परिवारले फर्निचरको काम गर्ने मान्छे हो’ भनेर पर्सिपल्ट विदेश जाने मान्छेसँग विवाहको कुरा छिने । विवाहपछि पनि पढाउने भनेका थिए अहिले घर सम्हालेर बस्नु परेको छ ।
श्रीमानसँग पोखरा घुम्नजाने रहर थियो । त्यो पनि पाइन । विवाह भएपछि परिवार कसरी चलाउने भनेर त दुबैजना मिलेर निर्णय गर्न सकिन्थ्यो नि ! । मलाई यति छिटै छाडेर विदेश जानुपथ्र्यो र ?
मनै बाटभन्दा भन्दा, श्रीमान् र उनको परिवारप्रति रत्तिभर माया छैन । जबरजस्ती जीवन चलारहेको छु । विवाह भनेको महिलाको लागि बन्धन रहेछ ।
थाहै नदिइ विहेको पाँचौ दिनमा श्रीमान् विदेश
श्रीमान् कतार हुनुहुन्छ । घर कमलामाई नगरपालिका हो । श्रीमानको नाम महेश । मेरो विवाह गएको फागुनमा भएको हो । श्रीमान् विदेश जानुभएको ४ महिना भयो । विहेको ५ दिनपछि कतार जानुभयो ।
विवाहपछि श्रीमान् विदेश जाने थाहा थियो । तर, पाँच दिनमै उँड्छन् भन्नेबारे थाहा थिएन । श्रीमान्ले विवाहको १÷२ वर्षपछि विदेश जाने भन्नुभएको थियो । विवाहको पर्सिपल्ट सँगै माइती गएर फर्कियौं ।
चौथो दिनमा ‘काठमाडौंमा सानो काम छ’ भनेर हिँड्नुभएको थियो । त्यसपछि सम्पर्क नै भएन । घर छोडेर हिडेको १० दिनमा श्रीमान् विदेश जानुभएको सासूबाट थाहा भयो । एक्कासी श्रीमान् विदेश गएको सुन्दा छाँगाबाट खसेजस्तो भएँ ।
श्रीमानले विदेश पुगेको पर्सिपल्ट मात्रै विदेशको नम्बरबाट फोन गर्नुभयो । त्यतिवेला मलाई सासुले मेस विदेश गएको भनेर सुनाई सक्नुभएको थियो मैले श्रीमान्सँग भन्दै नभनी विदेश गएकोमा गुनासो गरें । आक्रोश पनि पोखें । श्रीमान्ले उल्टै धम्काउनुभयो – ‘मलाई तनाव नदे, चुप लागेर बस ।’ म केही बोल्नै सकिन ।
हिजोआज हप्तामा एकपटक जस्तो फोन गर्नुहुन्छ । केही गुनासो गरे गाली गर्नुहुन्छ भन्ने डरले आफ्नो केही कुरा भन्नै सक्दिन । सोधेको प्रश्नको उत्तरमात्रै दिन्छु ।
श्रीमान विदेश गइसक्नुभएको थियो । त्यतिबेला विहे गरेको २ महिना भएको थियो । मलाई एक्कासी रगत बग्यो । महिनावारीको समय पनि थिएन । आत्तिएँ । तर,सर्लाहीमा हुनुभएको बुबाआमासँग दुखेसो गर्न मन लागेन । घरमा सासू ससुरालाई भन्दा सहयोग भन्दा बढी लान्छाना सहनुपर्ने डरले केहि भन्न सकिनँ । त्यतिबेला आफ्नो बच्चा खेर गएको जस्तो लाग्यो ।
श्रीमान्ले विदेश गएदेखि कतिपनि खर्च पठाउनुहुन्न । विहेमा टीका लगाएर दिएको पैसाले आफ्नो खर्च धानेकी छु । लोग्नेले यत्रो झुट बोल्दा, बेवास्ता गर्दा, खर्चबर्च नहेर्दा, परिवारले माया नगर्दा कसैले देखेका छैनन् ।
मैले भोली अर्को विवाह गरें वा पेशा व्यवसायका लागि बाहिर गएँ भने समाजले नै नराम्रो भन्छ । श्रीमानले जस्तो व्यवहार गरेपनि उनलाई नै कुरेर बस्ने अठोट गरेको छु ।
श्रीमान नहुँदा मेकअप किन ?
मेरो श्रीमानको नाम सन्तोष हो । हाम्रो घर हरिहरपुरगढी गाँउपालिकामा पर्छ । हामी एकअर्कालाई माया गथ्र्यौं । उहाँको विदेशको प्रोसेस गरेको थाहा थियो । विदेश जाने पक्का भएको तीन दिनअघि भागेर विहे गर्यौं ।
मेरो विवाहको उमेर पुगिसकेकाले परिवारमा कुरा चलिरहन्थ्यो । मैले सन्तोषसँगको प्रेम भन्न सकिन । उ विदेशबाट फर्किदासम्म परिवारले करकापमा मेरो विवाह गरिदिने डर लाग्यो र सल्लाहमा भागेर विवाह गर्यौं ।
विवाहअघि नै हामीले काठमाडौंमा कोठा खोजेका थियौं । सन्तोष विहेको ३ दिनमा विदेश गए । त्यसपछि म कोठामा बस्न थालें ।
सन्तोषले परिवारमा विवाह गरेको भनिसकेकाले १ महिना काठमाडौं बसेर श्रीमान्को घर फर्किएँ । श्रीमान्ले महिनामा ४० हजार रुपैयाँ पठाउनुहुन्छ ।
हामी दुईजनाको सम्बन्ध राम्रो छ । तर, श्रीमान नहुँदा मेकअप गरेपनि नचाहिने शंका गर्ने र हेछन् । विहेपछि सिन्दुर, टिका, पोते, चुरा लगाउने त सामान्य नै हो नि ! गाउँ फर्किएपछि एकदिन सासूले ‘लोग्ने घरमा छैन, कस्को लागि अनुहारभरी पोतेर बस्छेस् ?’ भन्नुभयो ।
‘श्रीमान् नभएको बेला मेकअप’ भन्दै छिमेकीहरु पनि कुरा काट्छन् । सबैको नराम्रो हुनुभन्दा बरु आफू नै नराम्री भएर बस्छु । कहिले श्रीमान् आउँलान् र उनीसँगै राम्री बनेर हिँडौ जस्तो लागेको छ ।’
महिलाका कुरा सुनिसकेपछि एकपटक पढेको ट्रक साहित्य झल्झली याद आयो– देशमा बसौं बेरोजगारीको चाप, विदेश जाउँ श्रीमती टाप ।
यसको जवाफ मनमै कोरें – ‘खै त श्रीमतीलाई घर बस्ने आधार ? श्रीमानका परिवार बुहारीप्रति बन्नुपर्दैन समझदार ?
(पात्रहरुको नाम परिवर्तन गरिएको छ । )